Bit By Bit - Running fanandramana - 4.6.2 Manolo, hanadiovana, ary Ahena
Ataovy ny andrana kokoa ny maha-olombelona amin'ny alalan'ny fanoloana fanandramana miaraka amin'ny tsy-andrana fianarana, fanadiovana tante- raka ny fitsaboana, sy hampihenana ny isan'ny mpandray anjara.
Ny faharoa tapa-torohevitra izay Te-hanolotra momba ny fampianarana nomerika fanandramana mahakasika etika. Rehefa ny Restivo sy van de Rijt andrana amin'ny barnstars in Wikipedia mampiseho, mihena ny vola lany dia midika fa ny etika dia lasa ampahany manan-danja mainka nanaovana ny fikarohana. Ankoatra ny amin'ny etika rafitra mitarika olombelona fikarohana foto-kevitra izay hamaritra aho tao amin'ny Toko faha 6, mpikaroka nanaovany fanandramana nomerika dia afaka ihany koa ny manovo amin'ny etika hevitra avy amin'ny loharano hafa: ny etika toro lalana mandroso mba hitari-dalana fanandramana momba ny biby. Indrindra indrindra, ny boky nanan-tantara Principles of Hifanaraka andrana Technique, Russell and Burch (1959) nanolo-kevitra telo fitsipika izay hitarika biby fikarohana: Manolo, hanadiovana, sy mampihena. Te-fanolorana fa ireo telo R ny Azo ampiasaina-in ny kely farany endrika-mba hitarika ny famolavolana ny olombelona fanandramana. Manokana,
Manolo: Manolo fanandramana amin'ny fomba tsy Invasive raha azo atao
Hanadiovana: hanadiovana ny fitsaboana mba hanao izany ho tsy mampaninona araka izay azo atao
Ahena: hampihenana ny isan'ny mpandray anjara ao amin'ny andrana araka izay azo atao
Mba hanao ireo R telo ny simenitra ary mampiseho ny fomba ahafahany mety hitarika ho amin'ny tsara kokoa sy kokoa andrana endrika maha-olombelona, ​​aho saha hamaritra an-tserasera fanandramana izay niteraka adihevitra etika. Avy eo aho ny mamaritra ny fomba ny soso-kevitra telo R mivaingana sy azo ampiharina fiovana ho amin'ny famolavolana ny fanandramana.
Ny iray amin'ireo adihevitra Hafanàm-po an-pahamendrehana indrindra saha fanandramana dia ny "areti-mifindra-pihetseham-po," izay nitarika ny Adam Kramer, Jamie Gillroy, ary Jeffrey Hancock (2014) . Ny fanandramana natao tao amin'ny Facebook ary atosiky ny fifangaroan-siansa sy ny fanontaniana azo ampiharina. Tamin'izany fotoana izany, ny fomba lehibe indrindra nifandray tamin 'ireo mpampiasa Facebook no News Feed, iray algorithmically notsongain'ilay napetraka ny Facebook fanavaozam-baovao avy amin'ny mpampiasa ny Facebook namany. Misy mpanao tsikera ny Facebook nandroso hevitra fa noho ny vaovao tsara indrindra Feed manana Lahatsoratra-namana mampiseho ny farany antoko-mety hahatonga ireo mpampiasa mba mahatsiaro malahelo ny fiainany, satria toa tsy dia mahaliana raha oharina. Etsy an-danin'izany, angamba ny vokany dia tena ny mifanohitra amin'izany; mety mahita ny namana manana ny fotoana tsara ho tsapanao sambatra? Mba hiatrehana ireo petra-kevitra mifaninana-ary mba hampandrosoana ny fahalalana ny fomba ny fihetseham-po ny olona iray dia misy fiantraikany amin'ny namany 'ny fihetseham-po sy ny mpiara-miasa aminy-Kramer nihazakazaka fanandramana. Ny mpikaroka momba ny 700,000 mpampiasa napetraka ho vondrona efatra ho herinandro: a "negativity mihena" vondrona, fa izay ratsy lahatsoratra amin'ny teny (ohatra, mampalahelo) dia tsapaka voasakana tsy hiseho ny News Feed; ny "positivity nihena" vondrona Fa izay lahatsoratra amin'ny teny tsara (ohatra, sambatra) dia tsapaka voasakana; sy fanaraha-maso roa vondrona. Tamin'ny fanaraha-maso ho an'ny vondrona "negativity mihena" vondrona, tolana dia tsapaka voasakana Mandritra izany taha ho toy ny "negativity mihena" vondrona, nefa tsy misy momba ny fihetseham-po afa-po. Ny fanaraha-maso ny vondrona ho an'ny "positivity mihena" vondrona dia naorina tao amin'ny mifanitsy lamaody. Ny famolavolana ny fanandramana io dia mampiseho fa ny fanaraha-maso mety tarika iray dia tsy foana tsy misy fiovana. Kosa, indraindray ny fanaraha-maso ny fitsaboana dia mandray vondrona mba hamorona ny marina fampitahana fa ny fikarohana fanontaniana mitaky. Amin'ny tranga rehetra, ny lahatsoratra izay voasakana avy amin'ny News Feed mbola misy ny mpampiasa amin'ny alalan'ny faritra hafa ao amin'ny vohikala Facebook.
Kramer sy ny mpiara-miasa aminy hita fa ho mpandray anjara eo amin'ny positivity nampihena toe, ny isan-jaton'ny teny tsara ny fanavaozana nihena sy ny isan-jaton'ny teny ratsy nitombo. Etsy an-danin'izany, ny mpandray anjara ao amin'ny negativity nahena toetra, ny isan-jaton'ny teny tsara nitombo sy ny isan-jaton'ny teny ratsy nihena (Sary 4.23). Na izany aza, vokatry ireo dia tena kely: ny fahasamihafana eo amin'ny tsara sy ny ratsy eo amin'ny fitsaboana teny sy ny fanaraha-maso dia tokony ho 1 tamin'ny 1000 teny.
Sary 4,23: Porofon'ny-pihetseham-po areti-mifindra (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) . Isan-jato ny tsara sy ny ratsy teny fanandramana Teny araka ny toe-javatra. Bars dia ireo tombanana Malagasy fahadisoana.
Efa nanisy resaka ny amin'ny lafiny ara-tsiansa izany fanandramana ao amin'ny fizarana mamaky bebe kokoa any amin'ny faran'ny toko, nefa indrisy, fanandramana io no tena fantatra amin'ny etika hiteraka adihevitra. Andro vitsy monja taorian'ny Ity fampianarana ity dia navoaka tamin'ny zava-niseho tao National Akademia Momba ny Siansa, nisy goavana na fitarainana avy amin'ny mpikaroka sy ny asa fanaovan-gazety. Fahatezerana manodidina ny taratasy mifantoka amin'ny hevi-dehibe roa: 1) mpandray anjara no tsy nanome misy fanekena an-dafin'ny faneva Facebook teny-of-service ny fitsaboana fa misy eritreritra mety Mampidi-doza ny mpandray anjara, ary 2) ny fianarana tsy nandalo fahatelo-antoko etika famerenana (Grimmelmann 2015) . Ny etika fanontaniana ao ity nahatonga adihevitra haingana ny gazety mba hamoaka ny tsy fahita firy ​​"famoahana fitenenana ny ahiahiny" momba ny etika sy ny etika fomba famerenana ho an'ny fikarohana (Verma 2014) . Tamin'ny taona manaraka, ny fanandramana dia mbola ho loharanom-mafy sy ny tsy fitovian-kevitra adihevitra, ary izany tsy fitovian-kevitra mety ho nisy ny unintended vokatry ny fiara ho any an-aloka fanandramana hafa maro izay ho tanterahana amin'ny alalan'ny orinasa (Meyer 2014) .
Raha jerena fa ny fototra momba ny areti-mifindra-pihetseham-po, aho izao tahaka ny mampiseho fa ny 3 R ny mety soso-kevitra mivaingana, azo ampiharina fanatsarana ho an'ny tena fianarana (na inona na inona mety manokana dia mihevitra ny momba ny fitsipi-pitondrantena ity fanandramana manokana). Ny voalohany dia Manolo R: mpikaroka dia tokony hikatsaka ny hanoloana fanandramana amin'ny tsy Invasive sy mampidi-doza teknika, raha azo atao. , Ohatra, fa tsy mandeha ny fanandramana, ny mpikaroka afaka voambaka voajanahary fanandramana. Araka ny voalaza tao amin'ny Toko faha 2, voajanahary fanandramana ireo toe-javatra izay misy zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao izay approximates ny kisendrasendra asa ny fitsaboana (ohatra, ny loteria mba hanapa-kevitra izay ho Voantso ho miaramila). Ny tombony ny voajanahary fanandramana dia ny mpikaroka tsy voatery hamonjy fitsaboana; ny tontolo iainana manao izany ho anareo. Amin'ny teny hafa, amin'ny voajanahary fanandramana, mpikaroka dia tsy nila fitaovana tamin'ny andrana olona News Feeds.
Raha ny marina, efa ho fotoana mitovy amin'ny areti-mifindra andrana-pihetseham-po, Coviello et al. (2014) dia fanararaotana Inona no azo antsoina hoe areti-mifindra-po voajanahary fanandramana. Ny fomba, izay mampiasa ny teknika atao hoe fitaovana hiovaova, dia somary sarotra raha mbola tsy nahita azy eo anoloan'ny. Noho izany, mba hanazava ny antony izany no ilaina, dia aoka ny hanangana ho azy. Ny hevitra voalohany fa mpikaroka sasany mety tsy maintsy mianatra areti-mifindra-pihetseham-po ho ny mampitaha ny lahatsoratra amin'ny andro izay misy ny News Feed Tena tsara ny lahatsoratra amin'ny andro izay misy ny News Feed Tena ratsy. Izany fomba ho tsara raha toa ka ny tanjona dia fotsiny ny milaza ny fihetseham-po afa-po ny lahatsoratra, fa io no fomba olana raha toa ny tanjona dia ny mianatra ny causal vokatry ny News Feed amin'ny lahatsoratra. Mba hijery ny olana amin'ny famolavolana izany, dia diniho Fisaorana. Ao Etazonia, tsara sy ny ratsy lahatsoratra Spike lahatsoratra pilao eo amin'ny Thanksgiving. Noho izany, amin'ny fisaorana, mpikaroka nahita fa ny News Feed Tena tsara sy izay namoaka zavatra tsara ihany koa. Fa, ny tsara Lahatsoratra mety no vokatry ny Thanksgiving tsy avy ny afa-po ny News Feed. Kosa, mba Tombanan'ny mpikaroka vokany ny causal mila zavatra izay manova ny afa-po ny News Feed tsy mivantana manova ny fihetseham-po. Soa ihany fa misy zavatra toy izany mitranga ny fotoana rehetra: ny toetrandro.
Coviello sy ny mpiara-miasa aminy hita fa iray andro orana ny tanàna ao amin'ny olona iray dia, eo ho eo, mihena ny ohatry ny lahatsoratra izay tsara amin'ny tokony ho 1 isan-jato hevitra ary hampitombo ny ohatry ny lahatsoratra izay ratsy noho ny 1 isan-jato teboka. Avy eo, Coviello sy ny mpiara-miasa nanararaotra izany mba hianatra zava-pihetseham-po areti-mifindra tsy misy ny ilaina ny andrana ny fitaovana na iza na iza News Feed. Amin'ny ankapobeny ny zavatra nataony dia ny fomba fandrefesana ny tolana dia fiantraikany noho ny toetr'andro ao amin'ny tanàna izay misy ny namana velona. Mba jereo ny antony mahatonga izany dikany, sary an-tsaina hoe miaina ao New York City, ary manana namana izay mipetraka any Seattle. Ary sary an-tsaina fa indray andro any dia manomboka ny orana any Seattle. Izany orana ao Seattle dia tsy hisy fiantraikany mivantana ny toe-po, fa dia hahatonga ny News Feed ho kely tsara sy ratsy kokoa noho ny namany ny lahatsoratra. Noho izany, ny orana any Seattle tsapaka fikirakirany ny News Feed. Mamadika izany zavatra manindry mandry any amin'ny antontan'isa azo antoka fomba dia sarotra (sy ny tena fomba nampiasain'i Coviello sy ny mpiara-miasa aminy dia kely tsy-standard) ka nasiany aho-tsipiriany kokoa fifanakalozan-kevitra ao amin'ny fizarana famakiana bebe kokoa. Ny tena zava-dehibe ny mahatsiaro momba Coviello sy ny mpiara-miasa ny fomba dia fa nanome fahafahana azy ireo hianatra pihetseham-po areti-mifindra tsy ilaina ny mihazakazaka ny fanandramana izay mety mety manimba ny mpandray anjara, ary mety ho ny raharaha fa amin'ny maro hafa toe-javatra dia afaka manolo fanandramana hafa teknika.
Faharoa ao amin'ny 3 Rs no diovina: mpikaroka dia tokony hitady mba hanadiovana ny fitsaboana mba hahatonga ny kely indrindra azo atao ratsy. , Ohatra, fa tsy fanakatonana afa-po izay na tsara na ratsy, ny mpikaroka afaka Nampiroborobo afa-po izay tsara na ratsy. Izany boosting endrika ho niova ny fihetseham-po afa-po ny mpandray anjara News Feeds, fa ho alefa iray mpanao tsikera ny ahiahy fa naneho; fa ny fanandramana mety ho nahatonga ny mpandray anjara mba tara fampahalalana manan-danja eo amin'ny News Feed. Miaraka amin'ny endrika nampiasain'i Kramer sy ny mpiara-miasa aminy, ny hafatra izay zava-dehibe dia tahaka ny mety ho voasakana tahaka izay tsy. Na izany aza, miaraka amin'ny boosting endrika, ny hafatra izay mety ho nafindra toerana mety ho an'ireo izay tsy dia manan-danja.
Farany, ny fahatelo dia Ahena R: mpikaroka dia tokony hikatsaka ny hampihenana ny isan'ny mpandray anjara amin'ny andrana, raha azo atao. Taloha, izany fampihenana nitranga ho azy satria ny miova vidin'ny Analog andrana dia avo, izay nampirisika fikarohana mba manatsara ny famolavolana sy ny fanadihadiana. Na dia izany aza, rehefa misy miova fandaniana aotra tahirin-kevitra, mpikaroka tsy miatrika ny fandaniana-tery eo amin'ny haben'ny ny andrana, ary izany dia ny mety hitarika ny tsy amin'antony fanandramana lehibe.
, Ohatra, sy ny mpiara-miasa Kramer afaka nampiasa mialoha fitsaboana vaovao mikasika ny mpandray anjara-toy ny fitsaboana mametraka mialoha fitondran-mba hahatonga ny fanadihadiana mahomby kokoa. More manokana, fa tsy mampitaha ny ohatry ny tsara teny amin'ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso ny toe-piainana, sy ny mpiara-miasa Kramer afaka oharina ny fiovana ao amin'ny ohatry ny tsara eo amin'ny toe-javatra ny teny; ny fomba antsoina matetika hoe hafa-in-fahasamihafana ary izay Mifandray akaiky amin'ny endrika samy hafa izay voalaza teo aloha, ao amin'ny toko (Sary 4.5). Izany hoe, ho an'ny mpandray anjara tsirairay, ny mpikaroka afaka namorona fiovana isa (taorian'ny fitsaboana fitondran - mialoha fitsaboana fitondran-tena), ary avy eo dia nampitaha ny fanovana maro ny mpandray anjara eo amin'ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso ny toe-piainana. Izany fahasamihafana-in-fahasamihafana fomba mandaitra kokoa ny antontan'isa, izay midika fa afaka hahatratra ny mpikaroka izany antontan'isa fahatokiana be mampiasa santionany kely. Amin'ny teny hafa, amin'ny alalan'ny tsy mitondra mpandray anjara toy ny "gadget", mpikaroka matetika dia afaka mahazo vinavina marina kokoa.
Raha tsy misy manana ny manta angon-drakitra dia sarotra ny mahafantatra tsara ny fomba mahomby kokoa ny fahasamihafana-in-fahasamihafana fomba fijery mety ho amin'ity tranga ity. Nefa, Deng et al. (2013) no nitatitra fa tamin'ny telo-tserasera fanandramana ny Bing fikarohana izy ireo dia afaka mampihena ny hampifandrafy ny vinavina amin'ny 50%, ary ny vokatra mitovy no tatitra ho an'ny sasany ao amin'ny Netflix fanandramana-tserasera (Xie and Aurisset 2016) . Izany 50% hampifandrafy fampihenana-pihetseham-po dia midika fa ny mpikaroka areti-mifindra mety ho afaka hanapaka ny santionany amin'ny antsasaky raha efa nampiasa ny fomba fanadihadiana hafa kely. Amin'ny teny hafa, miaraka amin'ny fiovana kely eo amin'ny fanadihadiana, 350.000 ny olona mety ho voatsimbina ny fandraisana anjara ao amin'ny fanandramana.
Tamin'izay fotoana izay dia mety ho manontany tena hoe nahoana ny mpikaroka no tokony hikarakara raha toa ka 350.000 ny olona tao an-pihetseham-po areti-mifindra tsy amin'antony. Misy roa manokana lafiny-pihetseham-po areti-mifindra izay manao fiahiana tafahoatra ny habeny mety, ary ireo lafin-javatra zaraina maro nomerika saha fanandramana: 1) misy ny tsy fahazoana antoka momba ny na ny fanandramana no Mampidi-doza ny fara faharatsiny, ny sasany mpandray anjara sy 2) ny fandraisana anjara dia tsy an-tsitrapo. Ao amin'ny fanandramana miaraka amin'ny toetra roa ireo dia toa tokony hatao mba hitandrina ny fanandramana ho kely araka izay azo atao.
Ho famaranana, ny telo R's-Manolo, sy hanadiovana ary mampihena-hanome toro lalana afaka manampy ny mpikaroka hanangana fitsipika ho ao an-fanandramana teti-dratsy. Mazava ho azy, ny tsirairay ireo fiovana mety ho areti-mifindra-pihetseham-po mampiditra varotra-offs. Ohatra, porofo avy voajanahary fanandramana dia tsy foana araka ny madio toy ny porofo avy amin'ny fanandramana sy ny boosting randomized mety ho sarotra kokoa ny fampiharana logistically noho ny andian-tsoratra. Noho izany, ny tanjon'ny soso-kevitra ireo dia tsy niova ny faharoa-maminavina ny fanapahan-kevitra ny mpikaroka hafa. Kosa, dia mba hampisehoana ny fomba telo R ny azo ampiharina amin'ny toe-javatra azo.